အိန္ဒိယအာရှ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစဉ်းစားသည်နှင့်၎င်း၏အရှေ့တောင်ဘက်အပေါ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်အတူတောင်ဘက်အပေါ်အနောက်တောင်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာပေါ်အာရေဗျပင်လယ်အကြားတည်ရှိသည်။ ဒါဟာတရားဝင် "အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်။ ဘီလီယံကို 1.2 ကျော်ခန့်မှန်းသည်၎င်း၏လူဦးရေကမ်ဘာပျေါတှငျ 2nd လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒါဟာအနောက်အပေါ်အရှေ့မြောက်ဘက်, ပါကစ္စတန်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်မျှဝေ; နှင့်အရှေ့ဘင်္ဂလားဒေ့နှင့်မြန်မာ (မြန်မာနိုင်ငံ) ။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးလွတ်လပ်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်သို့သော်၎င်း၏မြေယာက၏အစိတ်အပိုင်းပါကစ္စတန်၏လူမျိုးဖြစ်နှင့်အတူခှဲဝေသောအခါ 1858 ထံမှ 1947 တစ်ယခင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီအဖြစ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကဗြိတိသျှအုပ်စိုးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်, အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏ဒုတိယ language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယကော်ပိုရေးရှင်း 2013 ၏အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်နှစ်ဦးစလုံးထိန်းညှိအဖြစ်အိန္ဒိယတွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထိခိုက်နောက်ထပ်ဥပဒေ, 1999 ၏နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဥပဒေဖြစ်ပါသည် အရောင်းအ.
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: အိန္ဒိယနှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏နိမ့်ဆုံးရှိသည်ဖို့ကော်ပိုရေးရှင်းလိုအပ်သည်။
• အနိမျ့ Authorized အနည်းဆုံးမြို့တော်: အကြောင်းကို $ 100,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်သော INR 2,250 ၏အနိမ့်များနှင့်တတ်နိုင်ခွင့်အာဏာမြို့တော်လိုအပ်ချက်။
• ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်း: အိန္ဒိယကော်ပိုရေးရှင်း 25% ၏ပြားချပ်ချပ်အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်။
• အထူးစီးပွားရေးဇုန်: အဆိုပါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းတည်ရှိပြီးအိန္ဒိယကော်ပိုရေးရှင်းအထူးအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိကြသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်အခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာရပါမည်သည့်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူတို့အား။
• အိုင်တီနယ်ပယ်: အိန္ဒိယအိုင်တီကဏ္ဍတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းမှအတော်ကြာအခွန်မက်လုံးပေးထားပါတယ်။
• နှစ်ချက်အခွန်ကောက်ခံမှုစာချုပ်များ: အိန္ဒိယအတူတူဝင်ငွေပေါ်နှစ်ကြိမ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူများစွာသောအခွန်နှစ်ထပ်နှစ်စာချုပ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးသည်၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းပေးထားပါတယ်။
• လုပ်သား Speaking ကျွမ်းကျင်အင်္ဂလိပ်: အိန္ဒိယသည်၎င်း၏ရရှိနိုင်ပါသည်လုပ်သားအင်အားအများအပြားကျွမ်းကျင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါတယ်။
• အနိမျ့လုပ်အားခ: ငှားရမ်းရန်အလွန်တတ်နိုင်အိန္ဒိယန်ထမ်း။
အိန္ဒိယကော်ပိုရေးရှင်းကိုအခြားမှတ်ပုံတင်ထားသောကော်ပိုရေးရှင်းဆင်တူမဖွစျနိုငျသောကော်ပိုရိတ် name ကိုကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းရုံးအမည်များအခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အာဏာရှိသည်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့်စကားများသာအခြို့သောခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမည် (ဥပမာ, "Institute က" နှင့် "အမျိုးသား") အတွက်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏နာမတော်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ကျင့်အလွယ်တကူကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ရုံးခန်းမှာတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်သည်, သို့မဟုတ်အခြားသောအရပ်တို့ကိုမ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း.
အိန္ဒိယမှာတော့ကော်ပိုရေးရှင်းအိန္ဒိယတွင်တည်ရှိသည်ခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးတဲ့အဓိကလိပ်စာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ သို့သျောလညျး, အိန္ဒိယနှင့်ဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်တွင်တည်ရှိကာမှတ်ပုံတင်ရုံးနှစ်ဦးစလုံး, လိုအပ်သည်။ တချို့ကကော်ပိုရေးရှင်းသူတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးတည်နေရာအဖြစ်၎င်းတို့၏စာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်ရှေ့နေများ၏ရုံးခန်းလိပ်စာကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးအိန္ဒိယကနေရှိရာအရာရှိတဦးကစာပေးစာယူရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည် go ဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယရူပီးအတွက်အိန္ဒိယအတွက်အခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်လိုအပ်ချက် 100,000 (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 2,250 အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်း fixed ပမာဏ၏ရှယ်ယာခွဲတဲ့ကြေငြာ, အမည်ခံရှယ်ယာမြို့တော်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယတွင်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး 1,050 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ပိုရိတ်မှတ်တမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုအိန္ဒိယအတွက်အများပြည်သူမှမရရှိနိုင်၏။ ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၎င်း၏အပိုဒ်ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်နေလျှင်အပြင်, ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံထိုက်ပေရှိနိုင်ပါသည်။
အိန္ဒိယတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်စာရင်းစစ်ငှားရမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအပ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းကော်ပိုရေးရှင်းကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်, ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုပေးထားအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီ၏စစ်မှန်တဲ့အနေအထားကိုထင်ဟပ်ကြောင်းတိကျဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအကောင့်အသစ်များ၏ဒါရိုက်တာ 'နှင့်စာရင်းစစ်' 'အစီရင်ခံစာများအပါအဝင်အမြတ်နှင့်အရှုံးအကောင့်အဖြစ်တစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာစာရွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုသရုပ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများလည်းအကောင့်စာအုပ်တွေမှတပါးအခြားအမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။ ဤရွေ့ကားကတခြားမှတ်တမ်းများအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရှယ်ယာလယ်ဂျာတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်, ဒါရိုက်တာများနှင့်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်, ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်, စွဲချက်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်နှင့် debenture တစ်ဦးမှတ်ပုံတင်များပါဝင်သည် ကိုင်ဆောင်သူ။ ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစာရင်းစစ်အဖြစ်ခန့်အပ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ထားသောနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်အကောင့်သုံးသပ်ပြီး။
အိန္ဒိယတွင်တစ်ဦးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်ယေဘုယျအချိန်ကာလနှစ်ခုမှခြောက်ပတ်ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏အချိန်ကိုက်စာရွက်စာတမ်းများ၏လကျအောကျခံအဖြစ်, လိုအပ်သောအစိုးရအတည်ပြုချက်များ၏အချိန်ကိုက်ကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အိန္ဒိယကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနေကြသည်: နှစ်ခုသာရှယ်ယာရှင်များလိုအပ်သည်, အနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်တဝိုက် $ 2,250 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါသည်, ထိုကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 25% ဖြစ်ပါသည်, အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရန်အတွက်နေရာချထားရန်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းလက်ခံရှိပါတယ် အခွန်မက်လုံး, တူညီတဲ့ဝင်ငွေအဘို့အနှစ်ကြိမ်အခွန်ကောက်ခံရှောင်ရှားရန်အများအပြားနှစ်ဆအခွန်စာချုပ်များရှိပါတယ်, အိန္ဒိယအနိမ့်လုပ်အားခမှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားအင်အားစကားပြောအင်္ဂလိပ်ပေးထားပါတယ်။